Ciidamada dowlada Puntland oo howlgalo amaanka ah ka bilaabay magaalooyinka waa-weyn ee Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandCiidamada dowlada Puntland oo howlgalo amaanka ah ka bilaabay magaalooyinka waa-weyn ee Puntland
Ciidamada Puntland. Sawirka: Puntland Mirror.
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada dowlada Puntland ayaa maanta oo Arbaco ah bilaabay howlgalo balaaran oo ujeedkoodu yahay adkaynta amaanka gobolada Puntland.
Ciidamada ayaa howlgalo ka sameeyay magaalooyinka waa-weyn ee Puntland oo ay kamidyihiin, Garoowe, Gaalkacyo, Qardho iyo Boosaaso.
Ciidamo badan ayaa lagu soo daayay wadooyinka caasimada Puntland, Garoowe, si loo sugo amaanka guud.
Howlgaladan ayaa imaanaya asbuuc kadib markii shan nin oo Al-Shabaab ah oo uu ku jiray nin ajnabi ah ay kusoo qabteen howlgal wadajir ah oo ay xaafada koonfurta Gaalkacyo ka sameeyeen ciidamada PSF Puntland iyo ciidamada kumaandooska dowlada federaalka Soomaaliya ee Danab.
Saraakiisha amaanka Puntland wali kama aysan hadlin howlgalada hadda ka bilaabmay magaalooyinka waa-weyn.